पशुपतिमा लाश गाड्न पाइने कि नपाइने ? | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← नेताजी (व्यंग कविता)
टुँडिखेलमा अ‍ंगालो हाल्न पाइने कि नपाइने? →
पशुपतिमा लाश गाड्न पाइने कि नपाइने ?
हिन्दुको पवित्र तिर्थस्थल पशुपति अहिले फेरि विवादमा परेको छ। यसअघि पुजारीको विवादले पशुपति तातिएको थियो। अहिले भने लाश गाड्ने’bout विवाद उठेको छ। ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वको विश्व सम्पदा सूचिमा रहेको धार्मिक क्षेत्रमा सिमेन्ट, कंक्रिट, फलामे डन्डी प्रयोग गरी क्रिश्चियन र अन्य धर्मावलम्बीले चिहान बनाउन थालेको भन्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले केही अघि रोक लगाएको थियो। यही रोकका कारण अहिले क्रिश्चियनहरु क्रुद्ध बनेका छन्।
स्वभावतः इसाई देशका पश्चिमी मिडियाहरुमा उनीहरुको आक्रोशलाई महत्त्व दिएर समाचार बनाइँदैछ। उनीहरु त्यसमा चेतावनी दिँदैछन्- हामी संसदअगाडि लाशको जुलुस निकाल्छौँ।शनिबार त लाश गाड्न चाहने किरात समुदायका व्यक्तिहरुसँग झडप कै स्थिति आइलाग्यो। कोषले भने एउटा धार्मिक ………..महत्त्वको तीर्थस्थलमा अर्को धर्मका व्यक्तिले मनपरी गर्नु धार्मिक स्वतन्त्रता नभएको तर्क गर्दै आएको छ। लाश गाड्ने प्रचलन रहेका हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्ने उसले बताएको छ।तपाईँलाई के लाग्छ- पशुपति क्षेत्रमा अरु धर्मावलम्बीले लाश गाड्न पाउने कि नपाउने ? अब तपाईँको पालो- आफ्नो विचार छोटकरीमा लेख्‍नुहोला।
मेरो विचारमा पशुपति क्षेत्र हिन्दुका लागि मात्र नभएर विश्व कै सम्पदा हो। त्यसैले यो विश्व सम्पदा सूचिमा अंकित छ। त्यसैले यहाँको सम्पदामा खतरा हुने गरी सिमेन्ट, कंक्रिट, फलामे डन्डी प्रयोग गरी चिहान बनाउनु उचित हुन्न। आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारको पनि सम्मान गर्नुपर्छ। पशुपति क्षेत्रको श्लेषमान्तक वन हिन्दुहरुको पवित्र तीर्थस्थल हो। यहाँ हिन्दू कै लाश गाड्ने चलन भएका जातिहरुले पनि त्यसरी सिमेन्ट, कंक्रिट, फलामे डन्डीको प्रयोग गर्न पाइँदैन।हिन्दूहरु मै पनि लाश जलाउन काठको प्रयोग गर्ने कि इलेक्ट्रिक शवदाह गृह प्रयोग गर्ने भन्ने बहस भइरहेको छ।
हिन्दुको संस्कारमा लाश जलाएपछि चिहान बनाउने समस्या रहँदैन। लाश गाड्ने चलन भएका समुदायले पनि अब सोच्नुपर्छ- काठमाडौँ जस्तो शहरीकरण बढिरहेको ठाउँमा वर्षौँसम्म नष्ट नहुने चिहान खोज्नु कति उपयुक्त हुन्छ ? विदेश मै पनि यस्तो समस्या नदेखिएको हैन। आ-आफ्नो परम्पराको जगेर्ना गर्नुपर्छ तर त्यसो गर्दा अरुको परम्परामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। अरु समुदायले हिन्दुको पवित्र स्थलमा नै आफ्नो अधिकार जमाउन छाड्नु पर्छ, बरु वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जे गरेको छ, ठीक गरेको छ। बरु गर्न ढिला गरेको छ। कोषको दायित्व यो क्षेत्रको संरक्षण गर्ने हो, यसबाट ऊ पछि हट्न मिल्दैन। अब वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने काम सरकारको हो, कोषको हैन।
Posted By:Dambar Prasad Rimal Source: Mysansar